Is Aqoonsi Ictiraaf kama horeeyo ! | Awale orcid.org/0000-0002-2014-4023
Quruumuhu xornimadu iyagay ka timaadaa, cidi kama qaadi karto, haday ka qaadana kama haysan karto wakhtiguba ha dheeraadee. Gumaystuhu dad xor ah ayuu gumaystay ee kumay dhalan. Markaad xoriyada raadinayso Adigaa Ku dhawaaqaya SI cod dheer tix iyo tiraaba inaad tahay Gob, waxayse runtu tahay taasi oo kali ah kuma filna ee waxa jira qodobo kale oo u baahan ficil ahaan inaad u fuliso, kaasi oo la’aanteed gobonimadu kaa dheertahay.
Xeerka caalamku wuxuu aqoonsaday Qaranimo markay leedahay xuduud juquraafi oo sugan, bulsho ku dhaqan, xukuumad shaqaysa, iyo Dawlad heli karta isla markaana fulin karta heshiisyadeeda caalamiga ah ee ay quruumaha kale la gasho. Waxaase jira mid kale oo caalamku hada u arko muhiim ama qodob shanaad, waana qaranku habka uu u maro go’aan qaadashadiisa, ama sida uu u jiheeyo go’aamadiisa siyaasada, kaasi oo la rabo inuu noqdo mid maan-gal ah (rational).
Waxaa laga yaabaa inaad is waydiiso cida loo dabafadhiyo Nidaamkan Caalamiga, jawaabtuna waxay noqonaysaa inaanu jirin cid habaysay oo dusha ka eegtaa, ama quruun quruumaha kale wax dheer oo Aabe u ah. Taasi macnaheedu maaha in dunidan tahay haatan mid isu daadsan oo aan lahayn qaab habaysan oo ay u wada-shaqayso.
Xor mise Gob.
Siday iigu muuqato xornimadaada waxaad ku muujin kartaa Gobonimadaada, waana waxa ku geynaha fagaaraha Quruumaha xorta ah. Gonomidu waa ficilka ka dhasha xornimadaada, xaqdhawr, xilkasnimo ayaa aasaas u ah. Quruumaha xorta ah ayaa isu raacsan tix-galinta dhawaaqyada dhawrista Xuquuqdu (Declaration of Human Rights) inay tahay bar bilaw iyo bardhamaadka Gobinimadaada. Si kastaba ha ahaatee, aayahaaga oo aad ka tashataa waa xubinta ugu horeysa xuquuqda aadamaha ee Caalamiga waana astaanta ugu wayn xornimadaada. Taasi iyo kuwakale ee ku lamaan hadii aad waydana waxaa lumaya Gobonimadii, Qaranka aan xilkas ahayn ee aan xaqdhawrin aadamaha isna waxaa dibada looga arkaa mid lumiyay Xornimadii uu haystay iyo Gobonimadii uu ku naaloonayay. Sidaa darteed waa Shilin oo leh dur iyo daabiciis oo ma kala hadhaan. Taasi ayaanay ku qotontaa sharciyadaadu gudo iyo dibadba.
Xidhiidh ayaa ka dhexeeya Qaranimada iyo Xornimada, waxaana hubaal ah in aad u fahansantahay inaan Gobonimo jirin meesha aanu jirin Qaran xornimo buuxda haystaa. Macluumaadkan kor ku qoran ma faahfaahsana, waxaa ku kooban intii aan ku fahmi lahayn adiga, Qaranimada, Xornimada iyo Gobinimada waxaa idinka dhexeeya, taasi ayaa ku siin karta saadaasha dunida aad ku nooshahay.
Micnaha ugu wayn ee ku jiraa waxa weeyi, sideed isu aragtaa adigu marka laga hadlayo Gobonimo, qiime intee leeg ayey Qaranimadu kugu kordhinaysaa, si aad u ogaato ictiraafka hortii inaad tahay Gob ku nool Qaran xor ah, xidhiidhna ka dhexeeyo quruumaha kale, ka dibna waxaa kuu fududaanaya inaad hesho macnaha Ictiraafka, si aanad u siin qiime ka badan inta uu kaa mudan yahay amase aanad u hagran inta uu dadaal kaa mudan yahay. Waxaanay taasi kuu furaysaa albaab aad u marto Masuuliyadaada oo aad u gudato si xilkasnimo leh.